Jaajuus ayaa ku dhex jira ciidanka ammaanka gudihiisa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Keydka sawirrada: Hasse Holmberg / Scanpix
Jaajuus ayaa ku dhex jira ciidanka ammaanka gudihiisa
Boliiska oo warar u gudbiya dembiileyaasha
La cusbooneeyay onsdag 21 november 2012 kl 13.05
La daabacay onsdag 21 november 2012 kl 11.48
War-bixin cusub oo ka soo baxday hayadda nabad-sugidda ayaa sheegtay iney ciidanka ammaanka gudihiisa ku jiraan jaajuusiin.
Dhowr jeer ayey dhacday in xaalad ey ciidanka ammaanku kaga hoowl-geli lahaayeen kooxaha ku tallaabsada falal-dembiyeedyada laga soo baaraan-degaa ey suurta-geli waayeen, midaasina ugu wacneyd iyada oo boliiska dhexdiisa ey warar ka baxeen, sida ay sheegtay hayadda nabad-sugidda dalka oo magaceeda loo soo gaabiyo Säpo.
Muddadii u dhexeeysay agoosto 2009 illaa oktoobar 2011 ayaa dacwad laga gudbiyey dhacdooyin lagu tuhunsan yahay musuq-maasuq ee gaarsiisan 114. Halka 84 falalkaasi ka mid ahina la xiriiraan saraakiil ka hoowl-gasha ciidanka ammaanka oo lagu eedeeyey iney u jaajuuseen kooxaha falal-dembiyeedyada abaabulan.
Ahn-Za Hagström, waa madaxa waaxda saadaalinta ee hayadda:
- War-bixintan ayey ku qoran yihiin in saraakiil badan ee ka howl-gasha ciidanka ammaanka ey ku tallaabsadaan musuqmaasuq iyo laaluush qaadasho. Waxaa ka mid ah in boliisku horay u gudbiyaan war la xiriira fal lagu howl-geli lahaa, middaasina oo dembiileyaasha u sahleeysa sidii ey ugu tallaabsan lahaayeen falal ey kaga hor-tegeyaan, sidii loogu guul-dareeysan lahaa hoowsha ciidanka ammaanka. Waxaa sidoo kale war-bixinta ku xusan saansaamo aan badneyn ee muujineya in laaluush la qaato. Waana tallaabooyin la qaadey ee saaxiib-tinimo ku saleeysan.